सर्वसाधारणलाई आईपीओमा लगानी गर्ने अवसरः तीन कम्पनीले निष्कासन गदैछन् प्राथमिक शेयर? कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ् ? – ramechhapkhabar.com
सर्वसाधारणलाई आईपीओमा लगानी गर्ने अवसरः तीन कम्पनीले निष्कासन गदैछन् प्राथमिक शेयर? कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ् ?
भर्खरै मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्बको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त आईपीओमा अहिसम्मकै सबैभन्दा बढि आवेदन परेको थियो । जसमा ५० कित्ता सम्म आवेदन गर्नेले माग अनुसार नै आर्इृपीओ पाए भने ५० कित्ता बढि माग गर्नेले गोलाप्रथाको आधारबाट शेयर पाएका थिए । यसरी सबैले न्यूनतम आईपीओ पाएको सूचनाले झन सर्वसाधारणलाई आईपीओ चासोको विषय बनाएको छ ।
यतिबेला डिम्याट खाता खोल्नेको संख्यामा पनि उलेख्य वृद्धि भइरहेको छ । डिम्याट खाताको संख्या करिब २७ लाख पुगेको सिडिएसले जनाएको छ । आम लगानीकर्ताले शेयरमा निकै चासो देखाउँन थालेका छन् । यहि समयमा विभिन्न कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने होडमा छन् ।
यतिबेला आम लगानीकर्ता अब कुन कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गदैछ भन्दै पर्खिरहेका छन् । यहि समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ ।
-ग्रीन लाइफ कम्पनी
-सिंगटी हाइड्रो कम्पनी
महिला लघुवित्तले भर्खरै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको हाे । लघुवित्तले चाडै नै आव्हापत्र जारी गदै आईपीओ निष्कासनको मिति तय गर्ने भएको छ । आईपीओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेट बैंकिङका अनुसार चाडै नै निष्कासन मिति तय गर्ने काम भइरहेको छ । चाडै नै आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको क्यापिटलले जनाएको छ । लघुविततले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धका अनुसार फागुन पहिलो साता सर्वसाधारणको लागि कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितको लागि माघ ४ गतेबाट आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छौं । क्यापिटलले भन्यो, ‘पहिलो चरणको आईपीओ बाँडफाँट गरेपश्चात सर्वसाधारणको लागि दोस्रो चरणमा आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना छ ।’